Shahaadooyinka MICROchip SSL - In ka badan 70 nooc oo ah 2022
Liiska Shahaadooyinka SSL
Ilaali goobtaada oo ku dar kalsooni iyo ammaan booqdayaashaada
Xaqiijin noocee ah ayaad u baahan tahay? Waxaa jira saddex nooc oo ansax ah: Xaqiijinta Domain (DV), Xaqiijinta Ururka (OV), iyo Xaqiijinta Dheeraadka ah (EV). Faahfaahinta shirkadda OV iyo EV ayaa la xaqiijin doonaa inta lagu jiro ansixinta, taas oo u abuuri doonta ammaan badan macaamiishaada.
Daawo Liiska Qiimaha
Xaqiijinta Domain (DV)
Ansixinta domain waa qaabka ugu fudud ee ansaxinta, kaliya jeegaga domainka ayaa la eegi doonaa oo bixin doona xidhiidh sugan. THE Shahaadooyinka DV SSL waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa blogyada, foomamka xiriirka, iwm. Tan iyo markii i Shahaadooyinka DV SSL ma jiro wax ansax ah oo urur ah oo ka dambeeya magaca domainka, aan ka ahayn xiriir sugan, ma bixin doonto wax kasta oo kalsooni ah.
Xaqiijinta ururka (OV)
Ansixinta ururka waxa ku jira nooc dheeraad ah oo ansaxinta Marka lagu daro hubinta domainka, maamulka shahaado bixinta ayaa sidoo kale hubiya ururka. THE Shahaadooyinka SSL OV waxay u hoggaansamaan heerarka RFC waxayna u oggolaanayaan booqdayaasha boggaaga inay xaqiijiyaan ururka ka dambeeya goobta, taasoo horseedaysa heer sare oo kalsooni ah.
Ansixinta la dheereeyey (EV)
Xaqiijinta la dheereeyey waa habka ansixinta ugu ballaaran. Sida shahaado OV SSL, maamulka shahaado sido kale xaqiijiyaa ururka, laakiin si ka sii ballaaran u sameeya, sida dib u soo wacitaan. Xaqiijintan la dheereeyey waxay si muuqaal ah uga muuqataa browserka, taasoo ka dhigaysa ciwaanka cagaar. Magaca ururka waxa uu ka muuqdaa gudaha ciwaanka cagaaran.
GeoTrust EV SINGLE (1 Anno) € 242,50 N/A N/A Habee
GeoTrust EV SINGLE (2 Anni) N/A € 455,00 N/A Habee
GeoTrust RapidSSL SINGLE (1 Anno) € 21,00 N/A N/A Habee
GeoTrust RapidSSL SINGLE (2 Anni) N/A € 36.76 N/A Habee
GeoTrust RapidSSL SINGLE (3 Anni) N/A N/A € 52,50 Habee
GeoTrust RapidSSL WILDCARD (1 Anno) € 180,00 N/A N/A Habee
GeoTrust RapidSSL WILDCARD (2 Anni) N/A € 324,00 N/A Habee
GeoTrust RapidSSL WILDCARD (3 Anni) N/A N/A € 470,00 Habee
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE (1 Anno) € 127,50 N/A N/A Habee
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE (2 Anni) N/A € 247,50 N/A Habee
GeoTrust TrueBusinessID SINGLE (3 Anni) N/A N/A € 337,50 Habee
GeoTrust TrueBusinessID WILDCARD (1 Anno) € 660,00 N/A N/A Habee
GeoTrust TrueBusinessID WILDCARD (2 Anni) N/A € 1205,00 N/A Habee
GeoTrust TrueBusinessID WILDCARD (3 Anni) N/A N/A € 1.750,00 Habee
Sectigo SSL - PositiveSSL SINGLE (3 Anni) N/A N/A € 40.00
Waa maxay sababta loo dooran microchip.ch Hosting
Daawo Qorshayaasha Martigelinta